Xarunta duumada ee gobalka Mudug oo lagu wareejiey wasaarada caafimaadka ee Puntland. – Radio Daljir
Maarso 17, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Mar 17 – Maamulka gobalka Mudug iyo kan magaalada Gaalkacyo ayaa maanta si rasmi ugu wareejiyay wasarada caafimaadka ee Puntland xarunta duumada ee Gobalka Mudug oo 20-kii sano ee la soo dhaafay gacanta ugu jirtay dad shacabka ah.
Munaasabaddii wareejinta xaruntan waxaa goob-joog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirrada Puntland, maamulka gobalka Mudug, kan magaalada Gaalkacyo, maamulka caafimaadka ee gobalka Mudug, cuqaasha iyo waxgaradka gobalka, Waxaana xaruntani ay ka mid tahay dhismayaasha gacanta dawlada dib ugu soo laabtay tan iyo markii ay hawgallada Gaalkacyo bilawdeen.
Waxaa si rasmiya xarunta ula wareegay wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali C/laahi Warsame oo uga mahadceliyay dadaalka dheer ee lagu bixiyay in xaruntaasi gacanta dawladda dib loogu soo celiyo si loogu qabto hawlihii horay bulshada loogu hayay.
Wasiirku wuxuu sheegay in xarunta duumada looga faa’idaysan doono danta ummadda gobalkan, ayna noqon doonto xafiisyada isu-duwaha gobalka iyo kaydka dawooyinka gobalka oo noqon doonaa meesha ay ka duuli doonaan dhamaan tallaalada iyo hawlaha caafimaadka ee gobalka Mudug.
Dadaalkan dib gacanta dawladda loogu soo celiyay xarunta duumada waxaa kaalin baaxad leh ka qaatay odayaasha iyo waxgaradka gobalka Mudug oo waqti badan ku bixiyay sidii ay xarunta uga saari lahaayeen dadka shacabka ah ee muddada degganaa, dawladduna ay markaas kadib ugu qabsato hawlihii khuseeyay arrimaha bulshada.
Nabaddoon Gaani Xuseen Siciid oo ka mid ahaa waxgaradka goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay xarunta daganaayeen dhalinyaro mudo badan gacanta ku haysay, wuxuuna ka mahadceliyay sida qiimaynta leh ee ay uga aqbaleen codsiyadii dawladda iyo waxgaradka ee ku aaddanaa in ay xarunta ka baxaan.
Isku soo wada duuboo, dadaalkan wuxuu qayb ka yahay dadaallada dib gacanta dawlada loogu soo celinayo dhammaan xarumaha dawladda ee shacabku ay muddada badan gacanta ku hayeen, waxaana arrimahani ay qayb ka yihiin hawgallada magaalada Gaalkacyo muddada todobaaddada ah ka socda, xilliganna maraya meeshii u saraysay, guulo badanna dawladu ay ka gaartay.
Shacabka ayaa aad ugu bogaadiyey madaxda dawladda Puntland, tan gobolka, iyo tan magaalada Gaalkacyo xilka ay iska saareen fulinta hawlgallada amniga iyo sare u qaadidda bilicda magaalada Gaalkacyo.
Cumar Axmed Maxamed
Mudane ka tirsan baarlamaanka Puntland oo dar Alle ugu geeriyooday Galkacyo.